भारतमा अक्टोबरमा डिजायर सबैभन्दा बढी बिक्री, टप १० मा मारुती सुजुकीका ८ कार | Automotive News Nepal
भारतमा अक्टोबरमा डिजायर सबैभन्दा बढी बिक्री, टप १० मा मारुती सुजुकीका ८ कार २० कार्तिक, २०७६
अक्टोबरको उत्कृष्ट १० बेस्ट सेलिङ कारको लिस्टमा मारुती सुजुकीका ८ मोडल कार पर्न सफल भएका छन् ।
मारुती सुजुकीको डिजायर सो लिस्टमा पहिलो नम्बरमा परेको छ । यो वर्षको अक्टोबरमा डिजायर निकै चर्चित रहयो । सो महिना डिजायर १९ हजार ५६९ युनिट बिक्री भएको थियो भने गएको वर्षको अक्टोबरमा १७ हजार ४०४ युनिट बिक्री भएको थियो । यही वर्षको सेप्टेम्बरमा डिजायर १५ हजार ६६२ युनिट बिक्री भएको थियो ।
यो वर्ष मारुती सुजुकीको ब्रेजालाई छोडेर बाँकी सबै कार राम्रो बिक्री भएको छ । अक्टोबर २०१९ मा टप १० कारहरु १ लाख ४५ हजार ८७८ युनिट बिक्री भएको छ भने गएको वर्ष टप १० गाडीहरुमा जम्मा १ लाख २१ हजार ९४७ युनिट बिक्री भएको थियो । यो गत वर्ष भन्दा १६.६२ प्रतिशत बढी हो ।
अक्टोबरमा बिक्री भएका उत्कृष्ट १० कारमा दोस्रो नम्बरमा मारुतीको स्विफ्ट परेको छ । यो वर्षको अक्टोबरमा १९ हजार ४०१ स्विफ्ट बिक्री भएको थियो भने सेप्टेम्बरमा १२ हजार ९३४ युनिट बिक्री भएको थियो ।
मारुतीको अल्टो र बलेनो क्रमशः तेस्रो र चौथौ स्थानमा परेको छ । गएको वर्ष भन्दा यो वर्ष अल्टोको बिक्री १९.२८ प्रतिशतले घटेको छ । यो वर्ष अल्टो १७ हजार ९०३ युनिट बिक्री भएको छ भने गएको वर्ष २२ हजार १८० युनिट बिक्री भएको थियो । यो वर्षको अक्टोबरमा बलेनो १६ हजार २३७ युनिट बिक्री भएको छ भने गत वर्ष अक्टोबरमा १८ हजार ६५७ बलेनो बिक्री भएको थियो । सो लिस्टको ५ औं स्थानमा हुन्डाई आई२० पर्न सफल भएको छ । हुन्डाईले यो वर्षको अक्टोबरमा १४ हजार ६८३ युनिट आई२० बिक्री गरेको छ ।
मारुतीको वागन आर यो लिस्टको छैटौं स्थानमा परेको छ । सो कार १४ हजार ३५९ युनिट बिक्री भएको थियो । किया मोटर्सको सेल्टोस सो लिस्टमा ७ औं स्थानमा परेको छ । मारुती एसप्रेसो, मारुती ब्रेजा र इको यो लिस्टमा क्रमशः ८ औं, ९ औ र १० औं स्थानमा परेका छन् ।
वातावरणको लागि कति फाइदा छ बीएस ६ इन्जिन ? के हो उत्सर्जन मानक ?
वायु प्रदूषणलाई ध्यानमा राखेर भारतीय सरकारले १ अप्रिल २०२० देखि बीएस–६ उत्...
आज जेनेसिस क्याफेमा हार्ले डेभिडसन बाइक फेस्ट
काठमाडौं – आज काठमाडौंको पानीपोखरीस्थित जेनेसिस क्याफेमा हार्ले डेभिडसन बा...
लकडाउनको खुला सडकमा चौपायाको चाल (फोटोफिचर)
काठमाडौं – देश पुरै लकडाउनको अवस्थामा छ । यो अवस्थामा काठमाडौंका सडक पनि स...